NABANI NA UNOKWENZA EZI ZIBAMBI ZAMACICI ZE-DIY - EKHAYA
Nabani na Unokwenza Ezi Zibambi zamacici ze-DIY
Amacici angaphezulu nje kwezixhobo zefashoni. Zizipho ezixatyisiweyo, izipho ezithandwayo, kunye neengxelo ezithandwayo. Ukuzigcina zilungelelene kunokuba lucelomngeni, kwanaxa kukho abaququzeleli ababiza imali eninzi, abathengwa evenkileni. Akukho mntu wazi ingqokelela yakho ngcono kunawe, kutheni ungazenzi isibambi sezacholo esilungele iimfuno zakho zesiko? Nokuba uzama ukuzisa ucwangco ebomini bakho okanye uzonwabisa ngokuyilayo ngezisombululo zakho zokugcina, isibambi secici se-DIY sisifundo kuphela kude.
Indlela ephefumlelweyo yendalo
nerudol / Getty Imifanekiso
Ngexesha elizayo xa ucheba imithi yakho, khetha awona malungu anomtsalane anamasebe amaninzi. Coca amasetyana kwaye utshize ngepeyinti kumbala owuthandayo ukuxhasa uyilo lwakho lwangaphakathi. Amathoni akhanyayo kunye neentsimbi zongeza umnxeba wanamhlanje, ngelixa isambatho esicacileyo se-varnish okanye i-stain stains yendalo igcina umlingiswa womthi. Nyusa umthi wakho wamacici wokuhombisa kwinqanaba lamehlo eludongeni lokulala, okanye ulungiselele isibini kwivazi entle.
I-Boho fashion vibe
Spiderstock / Getty Imifanekiso
Ukwenza umnini wamacici kwi-hanger yokhuni yiprojekthi elula kwaye engabizi. Ekuphela kwento oyifunayo yisuti endala okanye ihanger yedyasi kunye nepakethe ye-screw-in eye hook. Khipha amagwegwe emthini ecaleni komphetho we-hanger, uwahlukanise ukuze amkele iiseti zakho zobucwebe beendlebe ezijingayo. Yenza iseti edibeneyo yee-hangers ukuba ufuna ukugcinwa okungakumbi, okanye ukongeza iintsimbi zomqala kunye nezacholo.
Umququzeleli wodonga lokumisa
UThomas Demarczyk / Getty Imifanekiso
Iidrowa zomshicileli zamandulo ezisetyenzisiweyo ziyindlela eyaziwayo kwiiblogi ze-DIY. Ezi bhokisi zingekho nzulu zenziwe ngamaplanga akumgangatho ophezulu kwaye zineendawo ezininzi ezahluliweyo ezilungele ukugcinwa. Yifake idrowa ngokuthe nkqo okanye uyibeke eludongeni kwishelufa, ujije iihokhi zamehlo ngaphantsi kwesahluli secandelo ngalinye. Jinga iperi yamacici enye kwigumbi, ushiya ezinye iindawo zingenanto ukugcina inkangeleko ecwangcisiweyo. Ukuba awukwazi ukufumana izandla zakho kwi-drawer yakudala, zenzele ngokwakho kwimithi ehlaziyiweyo.
Ukugcinwa okuncinci kunye nenhle
Olesia Denysenko / Getty Imifanekiso
Phinda ucinge ngezo bhokisi zezipho zincinci kunye neepakethe zohlobo olutofotofo obuzigcina njengeemeko zamacici ezixineneyo. Sika isipontshi okanye isikwere se-foam ngobukhulu, uze uyicinezele kwibhokisi. Isiponji sisebenza njengepincushion yamacici e-stud kwaye ayibizi mali ininzi ukuyibuyisela. Songa isipontshi ngelaphu elihle ukuze ubambe ubuhle, kwaye usebenzise iphepha lokunxibelelana lokuhombisa ukugubungela iseti ehambelanayo yeebhokisi zohambo lwakho lwempelaveki.
Isimo sengqondo sombutho
Sefa kart / Getty Imifanekiso
Isakhelo somfanekiso esisetyenzisiweyo siluncedo xa uhlengahlengisa ingqokelela yakho yobucwebe. Buyisela iglasi ngemesh yentsimbi okanye igridi yealuminiyam yokuhombisa, kwaye unesici esikhangayo sokubamba icici kwi-assortment yakho yamacici ajingayo. Peyinta isakhelo esihonjisiweyo ngemibala yentsimbi yokuchukumisa i-glam, okanye usebenzise ipeyinti emhlophe ngelaphu yeplastiki kwiphalethi entsha. Ezinye iinguqulelo zale projekthi zisebenzisa iileyisi ukuze zibonakale zithambile, zamandulo, ngelixa i-burlap yongeza i-rustic charm.
Gcina isikhokho kwikona yakho
Imifanekiso yeGoxi / Getty
Ibhodi yebhodi isebenza kanye kwisakhelo somfanekiso njengentsimbi okanye ilaphu, kodwa ikwayinto eguquguqukayo ngakumbi. Gcina amacici e-stud ngendlela efanayo obuya kwenza ngayo i-thumbtacks, usebenzisa i-screw-in eyes ukuxhoma i-chandelier kunye namacici okuhombisa. Khulula indawo kwi-nightstand yakho ngokuyenza isibambi secici esifakwe eludongeni. Gcoba ibhodi yebhodi kubude beplywood, uze wongeze umqolo we-screw-in hook ecaleni komzantsi wokuxhoma iintsimbi zomqala okanye izikhafu.
Kwi-roll enebhokisi ye-stud
Umnini wendandatho obuyiselweyo unokusebenza ngokukhawuleza njengomphathi wamacici kwi-pinch. Ukuba awunayo eyongezelelweyo, okanye uququzelela ibhokisi yakho yobucwebe, zama ukwenza eyakho. Gquba ii-roller zeenwele ze-foam kwii-swatches ze-velor, uzilungiselele kwi-tray engenanto okanye isakhelo somfanekiso. Ilungiselelo liya kufana nesibambi seringi, kwaye ungagcina amacici akho e-stud ngokuwafaka phakathi komqulu ngamnye. Ungasebenzisa kwakhona iidowels ezisongelweyo okanye izilaphu ezisongelwe ngokuqinileyo ezisikwe ukuba zilingane.
Isisombululo sokuhamba esilula
Mvltcelik / Getty Imifanekiso
Iibhegi zobucwebe bokuhamba zifumaneka ngokubanzi, kodwa azisoloko ziwagcina amacici ukuba abhijelwe kwaye angalungelelani. Ngamanye amaxesha, eyona ndlela iqinisekileyo kuku-DIY eyakho ibamba icici lokuhamba. Yenza incwadi yamacici enamaphepha azivelayo, okanye uthunge ingxowa esongelwayo enamacandelo amaninzi. Ayisiyiyo kuphela imeko yelaphu ekhaphukhaphu, kodwa ikwakunceda ukuba usebenzise ezo zilaphu zelaphu ezakhayo kwikhabhathi yokuyila. Khangela kwi-intanethi ye-DIY tutorials.
Cinga ngaphaya kweofisi
IHemera Technologies / Getty Images
Ukuba ufuna isisombululo esikhawulezayo nesisebenzayo kwingxaki yakho yokugcina amacici, jonga izixhobo zakho zeofisi. I-mesh pen cup iphindwe kabini njengesitya sokugcina i-bracelets, kwaye igridi yangaphandle ifanelekile kumacici okuloba. Ukuba ingqokelela yakho ifuna indawo eyongezelelweyo, zama ukusebenzisa i-wire mesh wastebasket. Yibeke kuSusan owonqenayo ukuze ufikeleleke ngokulula kunye nokugcinwa okongeziweyo malunga nesiseko. Seta umoya ngaphakathi kwekhabhathi yakho yokuhamba ngokongeza ibhalbhu yesitayela sakudala okanye izibane zentambo ngaphakathi kwengobozi yenkunkuma eguqulweyo.
Ingabizi kwaye ingabonakali
Sanny11 / Getty Imifanekiso
Ukuba izisombululo zakho zokugcina zifuna umsebenzi ongaphezulu kunesitayile, khetha enye efuna phantse kungabikho msebenzi. Isivalo sebhokisi yesihlangu sifanelekile kugcino lwamacici kuba umlebe wenza umphezulu wetaut kunye nesiseko esomeleleyo. Sebenzisa i-pushpin ukugqobhoza imingxuma kwikhadibhodi, uyibeke yodwa ngababini ukuze ifake amacici anobungakanani obahlukeneyo. Fihla isiciko kwidrowa yesinxibo okanye kwishelufu ukuze ufikelele ngokukhawuleza.
leliphi ijelo elivulwa ngesifrentshi
man utd vs Leicester live umsinga
ixesha elide kangakanani i-fortnite downtime